Ukukhutshwa kwe-CO2 kufunyenwe kwiindawo ezomileyo ezichaphazela umjikelo wekhabhoni | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Kule minyaka ingamashumi idlulileyo, kukho izifundo ezininzi ezijolise kutshintshiselwano ngeegesi zokugcina izityalo phakathi komoya kunye ne-biosphere. Kwiigesi ezifundwa kakhulu, zihlala zikhona eyokuqala i-CO2 Kuba yeyona nto inyusa uxinzelelo lwayo kakhulu kwaye yonyusa ubushushu beplanethi.
Isinye kwisithathu sayo yonke into ekhutshwa yi-CO2 ebangelwe zizinto ezenziwa ngabantu ifunxwa zizinto eziphila emhlabeni. Umzekelo, amahlathi, amahlathi ashinyeneyo, imigxobhozo kunye nezinye izinto eziphilayo nendawo ezihlala kuzo zifunxa i-CO2 ekhutshwa ngabantu. Kananjalo, nangona isenokungabonakali ngathi, Iintlango kunye ne-tundras nazo.
1 Ubudlelwane phakathi komoya kunye nomoya ophantsi komhlaba
2 Indawo yovavanyo eCabo de Gata
Ubudlelwane phakathi komoya kunye nomoya ophantsi komhlaba
Indima yemimandla eyomileyo enje ngeentlango, kude kube kutshanje, ayihoywanga luluntu lwenzululwazi nangona kukho izifundo ezibonisa oko zinempembelelo enkulu kwibhalansi yekhabhoni yomhlaba.
Uphononongo lwangoku lubonakalise ukubaluleka kokungenisa umoya phantsi komhlaba okukhuthazwa ngumoya, inkqubo edla ngokungananzwa equka ukukhutshwa komoya ogcwele i-CO2 kumhlaba ongaphantsi uye emhlabeni xa umhlaba womile kakhulu, ikakhulu ehlotyeni nakwiintsuku ezinomoya .
Indawo yovavanyo eCabo de Gata
Indawo apho ulingo lwenziwe khona yindawo enendawo eyomileyo eseCabo de Gata-Níjar Natural Park (Almería) apho abaphandi barekhode khona idatha ye-CO2 iminyaka emithandathu (2009-2015).
Kude kube kutshanje, uninzi lwenkolelo yezazinzulu yayikukuba i-carbon balance ye-ecosystems eyomileyo yayingathathi cala. Ngamanye amagama, isixa se-CO2 esikhutshwe ngokuphefumla kwezilwanyana kunye nezityalo sahlawulwa yi-photosynthesis. Nangona kunjalo, olu phononongo luphetha ukuba Kukho izixa ezikhulu ze-CO2 ezithi ziqokeleleke kumhlaba ongaphantsi kwaye ngamanye amaxesha umoya omkhulu ukhutshelwa emoyeni, kubangele ukongezwa kwe-CO2.
Kungenxa yoko le nto kubalulekile ukuba wazi ukukhutshwa kwe-CO2 yeenkqubo ezomileyo ukuze uqonde ngcono ibhalansi ye-CO2 yehlabathi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Yendalo » Ukukhutshwa kwe-CO2 kufunyenwe kwiindawo ezomileyo ezichaphazela umjikelo wekhabhoni
Amandla omoya kwihlabathi
UFujisawa sisixeko sokuqala esomeleleyo nesaneleyo eJapan